Umtiti oo muujiyay sida uu daacad ugu yahay Barcelona, muxuuse ka yiri wararka Cump Nou la xiriirinaya Griezmann? – Gool FM
(Spain) 09 Juunyo 2019. Samuel Umtiti ayaa markale muujiyay sida uu daacad ugu yahay Barcelona, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay joogitaankiisa kooxda reer Catalonia, sidaas darteed inuusan dooneynin inuu aado koox kale.
Daafaca reer France ayaa wareysi uu ku bixiyay Radio “RTL” ee dalka France wuxuu ku sheegay:
“Waxaan heystaa qandaraas, waana ku faraxsanahay Barcelona, waxaan soo qaatay xili ciyaareed adag, lakiin taas micnaheeda ma ahan inaan doonayo inaan u dhaqaaqo koox kale, waan la joogi doonaa Barcelona xilli ciyaareedka soo socda”.
Intaas kaddib Samuel Umtiti ayaa wax laga weydiiyay wararka lala xiriirinayo Antoine Griezmann inuu ku biirayo kooxda Barcelona wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Waa su’aal aad u wanaagsan, runtii waxba kama maqlin Antoine Griezmann inta aan ku wada sugneyn qolka dhar badelashada, balse hadii uu sidaas yiri waxay ka dhigan tahay inaan xiligaas ku sugneyn qolka”.
Si kastaba ha ahaatee Samuel Umtiti ayaan door muuqda ku yeelanin kooxda Barcelona, tan iyo markii uu dhaawaca soo gaaray bilawga xili ciyaareedka 2018/2019, taasoo ka dhigtay in si weyn lala xiriirayo bixitaankiisa suuqa xagaaga ee soo aadan.
Umtiti ayaa la filayaa inay xaalada ku adkaan doonto hadii ay kooxda Barcelona la saxiixato daafaca reer Holand ee Matthijs de Ligt, inkastoo kooxaha Arsenal iyo Juventus ay doonayaan inay la saxiixdaan daafaca reer France.
“Waxaan qabaa in Hazard uu isbedel ku sameyn doono Real Madrid” - Thibaut Courtois